किन लामो आयु बाँच्छन् जापानी ?
टोकियो-एक पटक फेरि जापानीले विश्वकै पाको उमेरको पुरुष हुने गिनिज रेकर्ड बनाएका छन् । १ सय १२ वर्ष ३ सय ४४ दिनका चितेशु वतनाबेको जन्म उत्तरी जापानमा १९०७ मा भएको थियो । लामो आयु हुनुका पछाडि हाँस्नु र मुस्कुराउनु प्रमुख कारण भएको उनी बताउँछन् ।
योभन्दा पहिले पनि सर्वाधिक उमेरको पुरुष १ सय १२ वर्षका जापानकै थिए । उनको गत महिना निधन भएको थियो । सबैभन्दा बढी उमेरेकी महिलाको रेकर्ड पनि जापानकै रहेका छन् । काने तनाका १ सय १७ वर्षकी छन् ।
चितेशु बोनसाई बिरुवा रोप्न सोख राख्छन् । उनलाई कस्टर्ड खाना मन पर्छ । उनले कृषि स्कुलमा अध्ययन गरेर पछि उखुको खेती गरेका थिए । उनका पाँच सन्तान छन् ।
यो त भयो चितेशुको कथा । तर, आखिर के कारणले जापानी लामो आयु बाँच्छन् त ? निश्चित रूपमा यहाँको जीवनशैलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तर, वास्तवमै यसका पछाडि के कारण हुन सक्छ । हामी तपाईंलाई बताउँछौँ ।
खानपानले बन्यौँ स्वस्थ
भनिन्छ, मानिस जस्तो खान्छ त्यस्तै बन्छ । जापानीहरू दीर्घायु हुनुमा खानपानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । आखिर जापानीहरू के खान्छन् त ? जापानीहरू विशेषगरी ताजा खाना खाने गर्छन् । उनीहरू ताजा सब्जी र माछा पनि ताजा नै खाने गर्छन् । खानाको मात्रा धेरै पनि हुँदैन । जापानी चिया र सुप धेरै पिउँछन् । चियामा पनि दूध नभएर हरियो पत्ताको प्रयोग गर्छन् ।
व्यायाम र सार्वजनिक यातायात
नेपालमा योग प्रख्यात भएजस्तै जापानमा विशेष किसिमको व्यायाम राजियो ताइसो प्रचलित छ । यो बिहान उठेर गर्ने गरिन्छ । यहाँ मानिस लामो समयसम्म कुर्सीमा बसेर काम गर्दैनन् ।
मेसिन बनाउने मामिलामा यो देशका मानिसले विश्वलाई पछि पारे पनि आफुलाई मेसिनमा निर्भर राखेका छैनन् । उनीहरू पैदल हिँड्नमा जोड दिन्छन् र विलासी गाडीको सट्टा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन् ।
स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण भूमिका
कुनै मुलुकको मृत्युदर तथा जीवनकाल त्यहाँको स्वास्थ्य सेवाको अवस्थामा धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ । जापानमा अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार जापानीहरू बारम्बार डाक्टरको जाँचका लागि जाने गर्छन् । यद्यपि उनीहरू सानो–सानो कुराका लागि डाक्टरकहाँ जाँदैनन् । जबसम्म स्थिति गम्भीर हुँदैन, उनीहरू डाक्टरको परामर्श लिँदैनन् ।